Saddex ka mid ah kooxaha waa weyn ee Ingiriiska oo heegan sare ugu jira Isco oo raba inuu ka tago Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 11 March 2019. Sida wararku ay sheegayaan saddex ka mid ah kooxaha waa weyn ee ka dhisan Waddanka Ingiriiska ayaa heegan sare ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen Isco oo doonaya inuu ka tago kooxdiisa Real Madrid.
Arsenal, Manchester United iyo Tottenham Hotspur ayaa la soo warinayaa inay heegan sare u galeen sidii ay ku heli lahaayeen Isco oo isku diyaarinaya inuu ka tago kooxda Real Madrid suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Isco ayaa dhaliyey hal gool waxaana uu caawiyey hal gool oo kale 16 kulan oo uu horyaalka La Liga u saftay kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan, xulashadiisa garoonka Bernabeu ayaana hoos u dhacday tan iyo markii uu Santiago Solari noqday macallinka koowaad ee kooxda.
26-sano jirkaan ayaa kaliya ciyaaray 17 daqiiqo oo horyaalka La Ligaha Spain ah tan iyo bartamahihii bishii Janaayo, halka uusan ciyaarin labadii lug ee wareegga 16-ka Champions league oo ay Real Madrid wajahday kooxda Ajax.
Todobaadkii la soo dhaafay xiddigaha reer Spain ayaa la rumeysan yahay inuu diiday inuu raaco Baska kooxda ka hor kulankii ay wajaheen Ajax, taasoo Los Blancos 4-1 looga adkaatay lagana reebay tartanka Koobka Horyaalladda Yurub.
Sida ay warinayso Shabakadda football.london, kooxaha Arsenal, Man United iyo Tottenham ayaa dhammaantood si dhow ula socda oo isha ku haya xaaladda Isco, waxaana ay doonayaan inay dalabyo ka gudbiyaan suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Xiddiga xulka qaranka Spain, Isco ayaa qandaraaskiisa haatan ee garoonka Bernabeu waxa uu ku eg yahay illaa xagaaga 2022-ka.
Ka bogo kala sarreynta gooldhalinta horyaalka La Ligaha Spain... (Lionel Messi iyo Luis Suárez oo halka sare ku jira!)